Ngaphezu kwama-50 iintlobo yokubala. Ukubalwa isiseko zephetshana, ubungakanani imiqadi, izinyuko zomthi. Ukwakha sokubala.
Ukubala izinto zokwakha, zokwakha calculators, kunye nabayili
Iingcingo, iindonga, imigangatho
Umqulu kunye namandla
Ukufeza ukwakhiwa indlu isakhelo ndijamelene rhoqo izibalo ngobungakanani zokwakha okanye ukubala ubungakanani uyilo yinxalenye.
Ukucanda ibhodi, amaplanga okanye ezinye nemithi umsebenzi wokwakha - njengoko kufunwa iindonga okanye umgangatho?
Izifudumezi nazo zifuna ubalo rhoqo. Ngaba oku uboya izimbiwa, amagwebu okanye enye usambathisa. Njengoko sendibhale, uyilo elingunomgogwana indlu nokwambathisa yam nezinto ndisebenzisa usambathisa, hayi kuphela umgangatho nophahla, kunye neendonga.
Zokuxhoma - lelinye ibali. Uphahla iimilo yam endlwini entsonkothileyo, nokubala imali iishingles isinyithi okanye ezinye izinto zokuxhoma kunzima. Kwaye nangoku kuyimfuneko ukuba zibe inkunkuma akhawunti eluphahleni. Kwaye kukho endlwini iminyaka eliqela enophahla izinto zokuxhoma.
Ixesha elizayo iza ejongene iindonga. Kwakhona ingqalelo ngokwakhe ukuzimanya, isithintelo umphunga ...
, Ezi balo akuyi kuba nzima Umntu uqhelene ikhosi algebra esikolweni. Thatha iphepha kunye wokubala, khumbula ifomula, khangela isibini amaxesha ... Kwaye khangela ... Ukunqanda imposiso ezenziwayo izaliswe iindleko okungeyomfuneko izibalo. Kwizithuthi, ukuba unento ukuyithenga kakhulu, okanye ngokuphendululekileyo ngokugqithiseleyo kakhulu, kulula ukuba umsebenzi akulungile kakhulu njalo-njalo.
Ngoko ke wazalwa ingcamango Kwathi ezi izibalo yesiqhelo emagxeni iinkqubo wonke iya kuqwalasela ize uzobe umzobo.
Kwaye okona kubalulekileyo - musa ukwenza iimpazamo! Ngapha koko, ixabiso ukusilela iphezulu kakhulu ngexesha lokwakha.
Ndiyathemba ukuba inkonzo yam kuya kukunceda abo usakha indlu ngezandla zakhe iinjineli-abakhi.